June 28, 2020 - Purakhabar
१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खोजेको दाबी गरेका छन् । त्यो खेलमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको उनको आरोप छ । मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आइतबार बालुवाटार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरूले पनि सुन्नु भएको होला, हप्ता १५ दिनमा प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुँदैछ, भारतका मिडिया सुन्नु भएको होला । भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नु भएको होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र सक्रिय छ ‘।’ आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको…
एमसीसी खारेजको माग गर्दै बुटवलमा विरोध प्रर्दशन
बुटवल, १४ असार । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)खारेजको माग गर्दै बुटवलमा विरोध प्रर्दशन भएको छ । ‘नेपालको विकास एमसीसीले हैन, नेपाली जनताले गर्नेछ । नेपालको सडक र विद्युत विदेशीको स्वार्थमा हैन, नेपाली जनताको पक्षमा हुनु पर्दछ । एमसीसी नेपाललाई नवऔपनिवेश बनाउने प्रक्रिया हो । एमसीसी खारेज गरौँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास गरौं’लगायतका प्ले कार्डसहित युवाहरुले स्वस्पूर्त रुपमा एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै खारेजको माग गर्दै प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न प्ले कार्डसहित बुटवलको पुष्पलाल पार्क, वीपी चोक, ट्राफिक चोक हुँदै पुनः पुष्पलाल पार्कमा आएर एमसीसी खारेजको माग…
‘साउनदेखि तलब पाएका छैनौं, माग्न जाँदा बजेट छैन भन्छन्’
गुर्भाकोट नगरपालिका–१ की केशकुमारी थापा छ वर्षदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा काम गर्छिन्। करार सेवामा नियुक्त उनले २०७० फागुन ६ गतेदेखि निरन्तर काम गर्दै आएकी छन्। गत वर्षसम्म उनलाई नियमित पारिश्रमिक आउँथ्यो। करिब एक वर्ष भयो पारिश्रमिक रोकिएको छ। २०७६ साउनदेखि उनले पारिश्रमिक पाएकी छैनन्। पारिश्रमिक नआए पनि उनले आफ्नो काम छाडेकी छैनन्। निरन्तर सेवामा जुटिरहेकी छन्। सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भएकी उनलाई कार्यालयले करार सेवा सकिएको पत्र थमाएको पनि छैन। तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्य कार्यालयका रूपमा रहेको सुर्खेतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय संरचनापछि…
तिर्सना बुढाथोकीको अर्को हर्कत, नेपालको झण्डा छातीमा बेरेपछी आलोचित
ईटहरी/ सामाजिक संजालमा बेलाबेला अ’श्ली’ल हर्कत देखाउँदै विवादमा आइरहने मोडल तिर्सना बुढाथोकी फेरि वि’वादमा र आलोचनाको सिकार भएकी छन् । छोटो भिडियो साझेदारी साईट टिकटकमा नेपालको झण्डालाई अमर्यादित तवरले प्रयोग गरेको भन्दै उनलाई गालि गर्नेको ओईरो नै लागेको छ । उनले नेपालको झन्डा छातीमा बेरेर राष्ट्रिय भावको गीतमा टिकटक भिडियो बनाएर पोष्ट गरेकी छन् । उनले टिकटक बनाउदै भनेकी छिन ‘सुन बरिष्टेहरु नांगै छु बुझिस् झन्डाले छोपेको छु मेरो लाज ।’ झन्डाले आफ्नो छाती छोपे पछि संजालमा देशमाथि तिर्सनाले राष्ट्रिय झण्डाकाे अपमान गरेको विश्लेषण गरेकी छिन् । उनले झण्डा सहितको…
एमसिसीविरूद्ध धनगढीमा बयलगाडा र्‍याली
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरूद्ध धनगढीमा बयलगाडा र्‍याली निकालिएको छ। ‘एमसिसी खारेज गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं’ भन्ने नारासहित बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने माइकिङ गर्दै बोलन्या थली संस्थाको नेतृत्वमा युवाहरूका एक समूहले र्‍याली निकालेको हो । आइतबार साँझ धनगढीको क्याम्पस रोडबाट रातोपुलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म बयलगाडा र्‍याली निकालिएको हो। बोलन्या थली अध्यक्ष यादव जोशीले राष्ट्रप्रेम भएका युवाहरू स्वत:स्फुर्त रूपमा र्‍यालीमा सहभागी भएको बताए। जोशीले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एमसिसी घातक रहेको भन्दै विरोध गरिएको बताए। र्‍यालीमा एक दर्जन बयलगाडामा युवाहरू एमससीविरूद्ध नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका थिए।
नेपालमा थप ४६३ जनामा संक्रमण पुष्टि,संक्रमित हुनेको संख्या १२ हजार ७७२ पुगेको छ।
काठमाडौं, असार १४ – नेपालमा थप ४६३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप ४६३ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या १२ हजार ७७२ पुगेको छ। संक्रमितमध्ये हालसम्म ३ हजार १३ जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आइतबारमात्रै कोरोनालाई जितेर १७९ जना घर फर्किएको प्रवक्ता डा। गौतमले जानकारी दिए।
दमौली, १४ असार । तनहुँकी १४ वर्षीया एक किशोरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनका आमा–बुबासहित आइसोलेसनमा राखिएको छ । व्यास २ स्थित सत्यवती मा.वि. दमौलीको क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यास नगरपालिकाकी १४ वर्षीया किशोरीमा शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भारतबाट आएपछि आफ्नो बाबुआमासँगै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी किशोरीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपनि उनका बाबुआमा दुवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । छोरी एक्लै नछाड्ने भनेर बाबुआमाले नै जाने इच्छा गरेपछि छोरीसहित आमाबुबालाई पनि व्यास १ स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको आइसोलेसनमा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीले बाबु वा आमामध्ये एक जना मात्र जान…
भारतीय बिँडी र नगदसहित तीन जना पक्राउ
बैतडी, १४ असार । हातहतियारसहित भारतबाट अवैध रुपमा ल्याइएको एक लाख ५० हजार मूल्य बराबरको बिँडीसहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दशरथचन्द नगरपालिका–८ त्रिपुराका २२ वर्षीय आकाश चन्द, १९ वर्षीय दीपक भट्ट र २१ वर्षीय प्रकाश मार्कण्ड रहेका छन् । उनीहरुलाई दशरथचन्द नगरपालिका–८ नल्तडीस्थित महाकाली किनारबाट गए राति पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार छली गरी महाकाली नदीमा ट्युबमार्फत अवैध रुपमा बिँडी भित्रिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले ती तीनजनालाई पक्राउ गरिएको जनाइको छ । बरामद गरिएको सामग्रीलाई महाकाली…
सेनाले १८ करोडको सवारीसाधन खरिद गर्दै, हेर्नुहोस के-के ?
काठमाडौं, १४ असार । नेपाली सेनाले १८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सवारीसाधन (अपरेसनल भेइकल) खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अत्यावश्यक भएकाले ‘अपरेसनल भेइकल’ खरिद गर्न लागिएको बताईएको छ । डबल क्याब पिकअप तराई र पहाडका लागि ५–५ वटा गरेर १० वटा खरिद गर्ने बताइएको छ । सेनाले जम्मा ३० वटा पिकअप खरिद गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सेनाले ‘सी’ क्याटेगोरीको एम्बुलेन्स पनि एउटा खरिद गर्दैछ । सेनाले एम्बुलेन्स ५ वटा माग गरेको थियो । भीआईपी र भीभीआईपीका लागि ‘ए’ क्याटेगोरीको एम्बुलेन्स एउटा खरिद गरिँदैछ । यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतको सवारीका…
अध्यक्ष ओली बैठकमा बस्न नचाहनुकाे कारण के छ ?
काठमाडौँ, १४ असार । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार त्यस दिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको बसाइ योजनाबद्धजस्तो देखिन्थ्यो । ‘एक जना यहाँ, एक जना त्यहाँ, एक जना ऊ पर बसेको छ, छुट्टाछुट्टै बसे पनि सबैको एउटै स्वर छ,’ ती नेताले भने । बैठकमा पूरै अवधि बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै एक घण्टा भाषण गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष…